Koronaavaayirasii: Kooriyaan Kibbaa koronaavaayirasiirratti of eeggannoo ol'aanaan akka taasifamu labsite - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayirasii: Kooriyaan Kibbaa koronaavaayirasiirratti of eeggannoo ol'aanaan akka taasifamu labsite
Kooriyaa Kibbaa keessatti lakkofsi namoota koronaavaayirasiidhaan qabamanii dabalaa waan jiruuf of eeggannoon cimaan akka taasifamu ajajje.
Pireezidaant Muun Jaa'iin akka jedhanitti biyyattii "rakkoo guddaan" ishee mudataa jira. Akkasumas guyyoonni itti aanaan kunneen vaayirasicha to'achuuf barbaachisoodha jedhaniiru.
Kooriyaa Kibbaa keessatti namoonni shan yoo dua'n namoonni 600 ol immoo vaayirasichaan qabamaniiru.
Gama biraatiin immoo Xaaliyaanii fi Iraan vaayirasicha to'achuuf tarkaanfii fudhataa jiru.
Kaabaa Xaaliyaanitti magaalonni Miilaanii fi Veenisiitti dhiyaatan to'annaa jala jiru.
Guyyaa tokkotti qofa namoonni 97 koroonaavaayirasiidhaan du'an
Torbee lamaan darban keessatti hayyamaan alatti gara magaalota Veeneetoo fi Loombaardii deemuu fi achii bahuunis hin danda'amu. Naannichatti manneen barnootaa heddus cufamaniiru. Dorgommiiwwan kubbaa miilaa sadarkaa ol'aanoorraa jiranis akka hin taasifamne dhoorkamaniiru.
Xaaliyaan keessatti namoonni lama yoo du'an lakkofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 100 ta'eera isaan keessaa namoonni 89 ta'an Loombaardii keessattidha.
Iraan keessatti eega guyyaa Roobiiti asi namoonni shan du'aniiru. Mootummaan namoonni vaayirasichaan qabamani 29 ta'anis qondaaltonni garuu vaayirasichi "magaalota hunda" keessatti tamsa'uu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru.
Kutaalee bulchiinsaa Iraan 14 keessatti manneen barnootaa, yuunivarsiitiwwan fi buufataalee aadaa eega gaafa Dilbataatii cufamniiru.
Kooriyaa Kibbaa keessatti maaltu mudataara?
Kooriyaan Kibbaa Chaayinaatti aansee biyya lakkofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 76,000 ol ta'uun biyya lammaffaadha. Doonii Jaappan keessattis namoonni vaayirasichaan qabamanii 600 ol ta'eera.
"Guyyoonni itti aanaan baay'ee murteessoodha. Mootummaan of eeggannoo cimaadhaan lakkofsa 'awwaalchaa' ni dabala," jedhaniiru pireezidaantiin biyyattii.
Gaafa Dilbataa Kooriyaan Kaabaatti namoonni 169 ta'an vaayirasichaan qabamaniiru - isaan keessaa 95 kan ta'an Bataskaanaa 'Church of Jesus' waliin hidhata kan qabaniidha.
Israa'eel namoota lammii Israa'eel hin taanee daandii qilleensa Kooriyaarraa dhaqan hin hayyamau jetteetti. Biyyattiinis daawwattoota Kooriyaa Kibbaa fi Jaappan irraa garas dhaqaniif hayyama hin kennu jetteetti
Chaayinaan lakkofsi namoota har'a, 23/02/2020 dua'nii 97 fi walii galatti namoonni du'an 2,442 ga'uusaanii himteetti
Koronaavaayirasii: Saayintistonni Awustiraaliyaa Chaayinaan alatti vaayirasii jalqabaa koronaavaayirasii fakkaatu guddisan
Koronaavaayiras: Raashiyaan waa'ee koronaavaayiras odeeffannoo sobaa tamsaasuushee haalte
Koronaavaayirasi: Kaartaan dogoggoraa tatamsa'ina koronavaayirasiirratti hojjetame akkamiin addunyaa walgahe?
Barattoota Itoophiyaa Chaayinaatti argaman maal keessa jiru?
10 Guraandhala 2020
Pirezidaantiin Naayijeeriyaa hookkara dhaabsisuu dadhabuusaanii amanan